Howlgal Dad & hub lagu qabtay oo laga sameeyay Beledweyne | Allbalcad Online
Home WARARKA Howlgal Dad & hub lagu qabtay oo laga sameeyay Beledweyne
Ciidamada Dowladda & kuwa Booliska Hir-Shabeelle ayaa howlgallo qorsheysan waxaa ay ka fuliyeen Xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan oo maalmihii la soo dhaafay xaalad amni darro ay kajirtay.
Ciidamada ayaa howlgalka waxaa ay sigaar ah uga fuliyeen Xaafada howl-wadaag oo xalay lagu dilay Nabadoon Caanka ahaa Gobolka Hiiraan, waxaana la sheegay n howlgalka lagu qabqabtay tiro dad ah & hub iyo rasaas farabadan.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay ku warameen in intii uu howlgalka socday uu ku dhaawacmay Hal ruux, kaddib markii qofka dhaawacmay iyo Ciidamada howgalka waday ay murmeen, taas oo keentay in xaabd lagu dhufto.
Dadka howgalka lagu qabtay ayaa waxaa la geeyay Saldhiga Booliska Beledweyne, waxaana saraakiisha Ciidaamada ay sheegeen in dadkaasi baaritaano ay ku sameeynayaan si look ala saaro.
Xalay ayaa rag hubeysan waxaa ay Magaalada Beledwyne ku dileen Nabadoon Xasan Ibraahim Nuur (Xasan Tiyeegoow) oo kamid ahaa Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan, sidoo kale uu ka dhacay dibadbax looga soo horjeeday Maamulka Hir-Shabeelle.
Next articleJubbaland oo shaacisay sababta ay u soo magacaabi la’dahay Xubnaha Guddiyada doorashooyinka